Andranomanelatra Tokantrano 3 voatafika, tovovavy iray voaolana
Miverina tanteraka ny tsy fandriampahalemana ao Andranomanelatra ao ankehitriny. Isan’ny lasibatra matetika amin’izany ny fokontany Tsaravavaka, izay tsy lavitra loatra an’Antsirabe akory.
Anisan’izany ny teny Ambohitrimanjaka noho ny fikasan’ireo mpitatitra hampiakatra ny saran-dalana mampitohy an’i 67 ha amin’ity tanàna iray ity ho 800 Ar manomboka ny sabotsy fiandohan’ny volana desambra ho avy izao. Vao mainka mitotongana andro aman’alina mantsy ny kalitaon’ny asa omen’ireto taksibe mihazo an’Ambohitrimanjaka ireto ny mpanjifany, hoy ireo mponina ka anisan’ireny ny tsy fanajana. Nanangon-tsonia ireo mponina nanehoana ny tsy fahafaliany izay fantatra fa hateriny any amin’ny antokon-draharaha misahana ny fitaterana an-tanety ( ATT). Takian’izy ireo ihany koa ny hampidirana koperativa vaovao mba hisian’ny fifaninanana ka izay mety sy mifanaraka amin’ny filàn’ny mponina no handehanany. Toraka izany koa ireo mponin’ Ivato. Ho an’ity farany indray dia tsy mampaninona ireo mpanjifa ny fiakaran’ny saran-dalana ho 600 Ar, saingy tsy eken’izy ireo ny hanaovana ny tapa-dalana ho 500 Ar na dia mandingana tobim-piantsonana iray aza. Hetahetan’izy ireo ihany koa ny hampidirana koperativa hafa raha toa ka tsy vonona ny hifanaraka sy hanaja azy ireo ny ao amin’ny zotra D. Tsiahivina moa fa ankoatra ireo mponin’Ivato dia tena mahita faisana ihany koa ireo vahiny mandalo eny an-toerana noho ny fihodinan’izy ireo an-dalana. Anisan’izany ny Ivato mihazo an’i Talatamaty dia mijanona, indrindra fa ny andro sabotsy.